Kioba: Mpiaro Ny Habaka Maitso Eny An-tanàn-dehibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2011 18:01 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Português, عربي, 繁體中文, Français, Español, 日本語, 简体中文, русский, English
Tamin'ny Desambra 2006 dia notapahana ny hazo be iray efa anjato taonany antsoina hoe Ceiba, na Kapoaka, tao San Agustín mpifanolo-bodirindrina amin'ny Havana, renivohitra Kiobana. Saingy tsy hazo fe hazo fotsiny io. Marika mampiavaka ilay tanàna sy ny lova ara-kolontsaina ho an'ity firenena Karibeana ity koa.
Ity tranga nampalahelo ity dia nanosika ireo tanora Kiobana hanangana ny El Guardabosques (Ny Mpiambina ny Ala na Forest Ranger) tamin'ny Janoary 2007 ka iraka efaina amin'izany ny “fandraisana anjara amin'ny fitantanana mahomby ireo habaka maitso”
El Guardabosques dia nitatitra ny fahafatesan'ilay hazonà Kapoaka tamin'ny alalan'ny mailaka nalefa tanaty vata fandraisana an-jatony, isan'izany ny an'ireo andrim-panjakana ao amin'ny governemanta.
“Tsy nampoizina ny vokany,” hoy i Isbel Díaz, mpanorina ilay vondrona mpiaro tontolo iainana, “ary izany dia nanosika anay hanomboka ny asa voalohany: famoahana gazety dizitaly.” Amin'izao fotoana ilay vondrona dia efa mamoaka gazety dizitaly maimaim-poana “mba hiampangàna ireo faharavàna manohintohina ny tonolo iainana eny amin'ny tontolon'ny tanàn-dehibe.”
Isbel Díaz, mpanorina ny El Guardabosques
Tsapan'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona ny anjara toerana tànan'ny haitao avo lenta sy ny tambajotra virtoaly amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina. Araka ny filazan'i Isbel Díaz, ireo tambajotra dia mamela antsika hanangana “ny fantsom-pifaneraseranao manokana ho fiampangana ny hetsika ataon'ireo olon-tsotra na andrim-panjakana ka manitsakitsaka ny lalàna, na mialokaloka any ambadiky ny tsy fisian'ny lalàna, manimba ny tontolo iainana.”
Avy amin'izany no nahateraka ny El Guardabosques, tambajotra iray tsy miankina aminà andrim-panjakana naorin'olona liana amin'ny natiora [es] :
Niainga taminà olona dimy tany am-piandohana, ny mponina rehetra ao San Augustín, betsaka ny olona sy vondrona tonga nanatevin-daharana. Ny olona sasany nandray anjara fotsiny tamin'ny fambolena hazo, dia tsy ho hita intsony aoriana ao, ary misy ny sasany izay nandray anjara tamin'ny zavatra rehetra ataonay.
Ny endrika tena manan-danja amin'ity tetikasa ity dia ny fifantohany amin'ny fifanotronana sy ny demaokrasian'ny fandraisana andraikitra. Tsy misy fanilikilihana mifototra amin'ny resaka taona, maha-lahy na vavy, fironana ara-pilàna, ny resa-pinoana, fironana ara-politika na toerana ara-toekarena mba handraisana anjara ao anatin'ny El Guardabosques.
Efa nandritra ny ho dimy taona, ny fanapariahana ilay gazety tao amin'ny aterineto dia natevenina tamin'ny fanaovana hetsika hafa an-jatony toy ny fanadiovana renirano, ranomasimbe na toerana fanariam-pako. Fanampin'izany, ireo tetikasa ho an'ny fiarahamonina nifantoka tamin'ny fambolena sy fikarakarana izay hazo novolena.
Amin'izao fotoana, ny gazetin'ny El Guardabosques dia alefa amin'ny alàlan'ny mailaka ho an'olona manodidina ny 1.000. Ny valo amby fitopolo isan-jatony dia an'ireo mponina ao Kioba izay manam-pahafahana miditra aterineto amin'ny alalan'ny tambajotra anatiny, anjerimanontolo ny ankabeazany, ivontoerana fikarohana, toeram-pianarana kolontsaina sy ara-javakanto. Ilay vondrona koa dia nandray anjara tamin'ny hetsika toy ny resaka an-databatra boribory “Kioba no saininay”, izay narindran'ny Fikambanana Hermanos Saiz.
Fambolena Anacagüita. Sary : Nampindramin'i Isbel Díaz
Tamin'ny Jona 2009, El Guardabosques dia nanara-dia ny Red Protagónica Observatorio Crítico [es], tambajotra iray izay ahitàna tetikasa ampolony izay miasa aminà olana mifandraika amin'ny ankizy, ny fahasamihafàna ara-pananahana, foko, torohay, fanandratana kolontsaina, ankoatry ny zavatra hafa. Nankalaza ny fihaonany faha-efatra ireo mpandray anjara tamin'ny 2010, tamin'ny fambolena hazonà Anacagüita iray tao amin'ny taninketsan-janakazo.
Araka ilay gazety dia:
Ireo olona miasa ao amin'ilay foibe, tarihan'ny taleny mahafinaritra, ireo ankizy eo anivon'ilay vondrom-piarahamonina, ireo mpikambana ao amin'ny Red Protagónica Observatorio Crítico, ny nasaina, dia samy niray feo nanapaka hevitra ny amin'izay toerana mendrika hambolena ilay hazo kely. Nataonay ny lavaka, nambolena ilay hazo, ary dia notondrahana ilay zanakazo.
Ny fahafatesan'ilay hazo Ceiba, na Kapoaka tao San Agustín dia nanosika ny fananganana tambajotra iray mahafinaritra misy ireo olona mifanohana sy mino ny ady atao hiarovana ny tontolo iainana. El Guardabosque koa dia nanitatra ny tambajotran'ireo mpiaro ny tontolo iainana avy ao aminy sady namorona toerana hahafahana mifanakalo amin'ireo tetikasa hafa